बुद्धभुमि नेपालको आईपीओको नतिजा अब हेर्ने मिल्ने, यसरी हेर्नुहोस् !
असोज २२, २०७८ MT
बुद्धभुमि नेपाल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको धारण सेयर (आईपीओ) को बाँडफाँड सम्पन्न भएको छ। शुक्रबार बिहान १०:३० बजे नै आईपीओ बाँडफाँड सम्पन्न भएको ष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक सिभिल क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेडले जनाएको छ।
मागभन्दा ३६.१८ गुणा बढी आवेदन परेकोमा गाेलाप्रथाद्वारा बाँडफाँड गर्दा ७४ हजार ४ सय आवेदकले मात्र १० कित्ताको दरले सेयर हात पारेका छन्। २० लाख ३० हजार ९ सय ५५ जना आवेदन दिएकोमा १९ लाख ५६ हजार ५ सय ५५ जनाकाे भने हात खाली भएको छ।
कम्पनीले प्रति सेयर १०० रुपैयाँका दरले ८ करोड रुपैयाँ बराबरको ८ लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरेको थियाे । जसमध्ये १६००० कित्ता (२%) कम्पनीका कर्मचारीलाई, ४० हजार कित्ता (५%) म्युचल फन्डलाई र बाकी ७ लाख ४४ हजार कित्ता सर्वसाधारणको लागि छुट्टयाईएको थियो।
यसरी हेर्नुहोस् नतिजा ?
आइपिओको नतिजा सार्वजनिक भएपछि कम्पनीकाे आईपीओको नजिता यी ३ तरिकाबाट हेर्न सकिन्छ ।आइपिओको नतिजा सिडिएससीको वेबसाइट (https://iporesult.cdsc.com.np/) बाट हेर्न सकिन्छ । जसको लागि सिडिएससीको वेबसाइटमा गएर कम्पनि सेलेक्ट गरि 16-digit BOID मा आफ्नो डिम्याट नम्बर राखेर हेर्न सकिन्छ। साथै बिक्री प्रबन्धक सिभिल क्यापिटल मार्केटको वेबसाइटमा गएर पनि नतिजा हेर्न सकिनेछ।
त्यस्तै, मेराे सेयरमा गई आफुले आईपीओमा आवेदन गर्दाको एप्लिकेसन रिपोर्टमा गएर त्यहाँबाट हेर्न सकिन्छ ।
प्रकाशित : शुक्रबार, असोज २२, २०७८१४:३५
९० करोड बराबरको आइपियो भर्ने आज अन्तिम दिन, तपाईंले भर्नु भयो ?